DRC: Felix Tshisekedi oo awoodda ku jiray maalmo ka hor 100 maalmood - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA DRC: Felix Tshisekedi oo awooda ku jiray maalmo kahor 100 maalmood
DRC: Felix Tshisekedi oo awoodda horey u lahayd maalmo 100
Haatan waa 100 maalmood in Felix Tshisekedi uu ku sugan yahay madaxa DRC. RFI ayaa usbuucan u muuqata rikoodhkii biladii ugu horaysay ee madaxweynenimadiisa.
Habka Tshisekedi ee ka dhanka ah shabakadda Kabila
Madaxtinimada Felix Tshisekedi waxaa lagu xardhay awood qaybsi awood leh Madaxweynihii hore Kabila, kaas oo isbahaysigiisu uu gacanta ku dhigay labada gole, laakiin sidoo kale saameyn weyn ku leh shabakadaha dhaqaalaha iyo ciidamada.
Muxuu ahaa macnaha guud ee ku saabsan istaraatiijiyadda Felix Tshisekedi tan iyo imaatinkiisii? Booqashada Mareykanka bishii Abriil, Felix Tshisekedi wuxuu ballanqaaday " unbolt Nidaamka « talisnimo Laga soo bilaabo kii ka horeeyey. Laakiin dhab ahaantii, istiraatiijiyaddiisa ilaa iyo hadda waxay la mid tahay tan tillaabooyinka yaryar.
Ma weerarto " frontally Danaha madaxweynihii hore xilligan, midkoodna siyaasad iyo dhaqaale midna ma ahan, ee waxaan door bidaa " si tartiib ah horay ugu dhaqaaq si ay u tijaabiso qolkeeda socodka ", Falanqeeyaha goobjoogaha, talaabooyinka" éclat Waxaa loogu talagalay " calaamadee fikirka »: Hawlaha waaweyn, siideynta maxaabiista siyaasadeed iyo furitaanka fagaaraha dadweynaha. Hal dariiqo oo ah in aan dagaal culus la gasho madaxweynihii hore isagoo isku dayaya " qabsado dalka Bidix ka banaan yahay « maqnaanshaha ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda Diblumaasi ayaa yidhi.
Lagu dhex qariyey dalka gudahiisa oo uu haysto Yuusuf Kabila on Senate iyo Golaha iyo kuwa kaleFelix Tshisekedi wuxuu sidoo kale taxadaray tan iyo markii la doortay isaga si loo hubiyo sharci ahaanshaha dibadda, kordhinta safarka dibedda: Angola, Uganda, Rwanda, Mareykanka. Wadamada uu yaqaan waxay noqon karaan xulufooyin qiimo badan wajigiisa ka wajihi kara madaxweynaha meesha ka baxaya.
Waxaa wali la arki doonaa ilaa inta ay ku filnaan doonto in la xasiliyo dulqaad la'aanta dadka reer Kongo ee doonaya isbadal, iyo sidoo kale dulqaad la’aanta xulafada isku midka ah ee dibadaha jooga, kuwaas oo iyana taageeradooda ka filanaya in uu qabto. dib-u-habeyn qoto-dheer oo lagula dagaallamo musuq-maasuqa qaasatan, oo ha la ogaado.
Government Dowlad iyo ra'iisul wasaare midna
Maalmo 100 kadib markii uu xukunka yimid, Felix Tshisekedi wali ma lahayn Raiisel wasaare ama dawlad midna. Toddobaadkii hore, si kastaba ha noqotee, markii uu u safray Kisangani, madaxa dalku wuxuu ballanqaaday inay tahay maalin su'aal la iska weydiinayo. Maxaa xannib ah? Maxaysan Felix Tshisekedi iyo Joseph Kabila u imaan karin heshiis? Miyay tani calaamad u tahay xasilloonida isbahaysiga ee ay kala saxeexdeen pro-Tshisekedi iyo pro-Kabila oo ku dhammaaday bishii Febraayo heshiis iyo awood wadaag?
Si rasmi ah, hadalka ayaa dib u xaqiijinaya. Tani waa markii ugu horreysay oo " hogaamiyaasha laba isbahaysi Go’aansado ” si ay isugu soo baxaan aqlabiyada baarlamaanka Sidaa darteed waa caadi in tan la qaato waqti yar »Kulaylka Aubin Minaku on RFI Isniinta.
Laakiin si aan rasmi ahayn, xitaa gadaal masraxa awooda, qaar ma qarsadaan dulqaadkooda mar dambe. Oo aqoonso in xannibaadan ay ka turjumeyso jawiga " aamin »Iyo« shaki Kaasoo si tartiib tartiib ah u degay inta u dhexeysa pro-Tshisekedi iyo pro-Kabila.
Asal ahaan, waa su'aasha ah isku dheelitirka awooda ka dhaxaysa labada isbahaysi ee la ciyaarayo, iyadoo dhinac kaliya ah Joseph Kabila uu ka walaacsan yahay inuu awoodi karo inuu ku tiirsanaado ra'iisul wasaare kaasoo daneyn doona danahiisa iyo Mid kale ayaa ah Felix Tshisekedi, oo og in uusan aqbali karin ra'iisul wasaare in loo diidi doono taageerayaashiisa, laakiin sidoo kale xulafadiisa caalamiga ah.
Waxaa kale oo cadaadis saaran Mareykanka uu diiday inuu magacaabo Albert Yuma oo markii hore uu soo jeedinayo Joseph Kabila. Gaar ahaan illaa iyo hadda Felix Tshisekedi wuxuu umuuqdaa inuu yahay guuldaradii weynaa ee heshiiskii lala galey madaxweynihii hore, kaas oo leh qabashada weyn ee Guurtida, Golaha iyo inta badan xukumadaha.
Wali,, madaxweynaha cusub wuxuu bilaabay inuu lahaado " degdeg ah Ayuu yidhi sarkaal ka tirsan xisbiga. " Waa inaan hore u soconaa Wuxuu sharraxay, haddii kale waa inuu la kulmaa jahwareerka shacabka.
♦ Su’aasha amniga ee bari
Felix Thsisekedi wuxuu ka mid ahaa ballanqaadyadiisii ​​ololaha weynaa, wuxuu ballan qaaday inuu soo celin doono amniga bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo. Gaar ahaan adoo u guurinaya shaqaalaha militariga Beni, oo ah magaalo ay xasuuqeen dilal baaxad leh oo ay gaysteen kooxaha hubaysan. Maalmaha 100 kadib markay xukunka imaadeen, ka waran?
Bartamihii Abriil, booqashada Goma iyo Beni, Felix Tshisekedi ayaa mar kale ballan qaaday si loo hagaajiyo amniga bariga. " Waa lagama maarmaan in kor loo qaado milatariga oo aad ugu dheeraaday Waqooyiga Kivu Wuxuu yidhi. Iyo maxkamad saar saraakiisha ama siyaasiyiinta xiriir la leh kooxaha hubaysan.
Laakiin maadaama, duurka, dib u cusbooneysiin laguma helin ciidamada oo sidoo kale ma jirin bilowga maxkamadaynta. Aflagaadada madaxweynaha ayaa ku kalifaysa isaga oo leh ma doonayo in uu ku deg dego. " Waqti ayey qaadataa in la diyaariyo istiraatiijiyad dhawaaq ah Ayuu yidhi Rubens Mikindo, oo ah madaxa fulinta ee UDPS.
Félix Tshisekedi ayaa sidaas ku gartay isaga oo abaabulay kulan muhiim ah oo amniga ah oo ka baxsan caasimada, Lubumbashi, iyo inuu labo jeer aado North Kivu. Laakiin khudbadaha ka baxsan, ficilada halganka waa in la raaco.
Tan iyo markii la doortay, tusaale ahaan, ma jiro eray ku saabsan ololihiisii ​​ballanqaadka ahaa inuu shaqaalaha ciidanka u wareejin doono Beni si uu u helo hufnaan dheeraad ah. Midkoodna dejinta barnaamij hub ka dhigis iyo dib-ulaabashada kooxaha hubaysan.
Miyay runtii leedahay awood? Tani waa arrinta oo dhan marka loo eego dhibaatada ku jirta sameynta dowlad iyo Golaha Qaranka, Guurtida iyo laamaha amniga oo ay xukumaan isbahaysiga daacad u ah Madaxweynihii hore Joseph Kabila.
Isha maqaalka: http://www.rfi.fr/afrique/20190504-100-jours-pouvoir-tshisekedi-rdc
500 sano ee dhimashada Leonardo da Vinci: xagga dib u heshiisiinta France / Italy
Venezuela: Tilmaamaha Sabtida; Juan Guaido ayaa wali doonaya in uu ku biiro ciidankiisa